दायित्वबाट रत्तिभर बिचलित हुने छैन: नरेश भण्डारी | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दायित्वबाट रत्तिभर बिचलित हुने छैन: नरेश भण्डारी
दायित्वबाट रत्तिभर बिचलित हुने छैन: नरेश भण्डारी
माघ २६ गते, २०७४ - १६:११
काठमाडाैं । प्रदेश न. ६ काे मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिरहेका नेकपा माअाेवादी केन्द्रका युवा नेता नरेश भण्डारीले मुख्यमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएकाे बताएका छन् । याे प्रदेशमा संसदीय दलको नेतामा नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्वऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई चयन गरेपछि भण्डारी बाहिरिएका हुन् ।
तर, उनले प्रदेश समृद्धिका लागि आफू दायित्वबाट बिचलित नभएकाे बताएका छन् । उनले भने, ‘पार्टीले गरेकाे निर्णय विपरित नगएर प्रदेशकाे समृद्धी कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर लागि पर्ने छु ।’
मुख्यमन्त्री भएर मात्रै समृद्धीकाे काम गरिन्छ भन्ने हाेइन, सांसद भण्डारीले भने, ‘आफ्नो दायित्वबाट म विचलित भएको छैन । प्रदेश ६ को समृद्धिका लागि देखेकाे भिजन प्रयोग गर्ने र प्रदेश सरकारलार्इ सहयोग गर्ने छु ।’
जुम्ला प्रदेश (क) बाट निर्वाचित सांसद भण्डारीले जुम्लामा राम्रा काम गरेर देखाएका छन् । विरामी हुदा सिटामाेल सम्म नपाउने जनताका लागि जुम्लामा ३०० शैयाकाे अस्पताल समेत बनाउन सफल भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिए पनि गरीबीको भिमकाय पहाडले च्यापिएको यो प्रदेशलाई समृद्धिकाे बाटाेमा दाैडाउने दाैडमा निरन्तर यात्रामा लागिरहने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हिजाे राज्यले नै कर्णाली प्रदेशलार्इ हेर्ने दृष्टिकाेण फरक बनाएकाे थियाे र त कर्णाली गरिब प्रदेशका रूपमा परिचित छ । यहि परिचयलार्इ रूपान्त्रण गरेर ६ नम्वर प्रदेशकाे समृद्धि हेर्न निम्ता पत्र पठाउने प्रदेशकारूपमा बिकास गर्न सकिन्छ भनेर वाेलेकाे हुँ ।’
सामाजिक संजालमा सांसद भण्डारीले भनेका छन् ।
समग्र राजनीति यात्राबाट हेर्दा याे अल्पबिराम हाे । राजनीतिक जीवनकाे अन्त्य हाेइन । गरिबीकाे भिमकाय पहाडले च्यापिएकाे याे प्रदेशलाई समृद्धि हेर्न निम्ता पत्र पठाउने प्रदेशकारूपमा बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने सपनाले मलाई याे भुमिकाका लागि उत्प्रेरित गरेकाे थियाे । याे प्रकृयामा सघाउने नेतृत्वपंक्ति, तपाईं समस्त सुभेच्छुक र स्वप्न द्रस्टाहरूमा हार्दिक अाभार ! समृद्ध र बिकासकाे प्यासले काकाकुल कर्णाली / ६ नं. प्रदेशप्रतिकाे दायित्वबाट रत्तिभर बिचलित हुने छैन !
माघ २६ गते, २०७४ - १६:११ मा प्रकाशित